ကြက်ဥ ကို ရိုးရိုးပြုတ်စားရတာ ငြီးငွေ့နေသူများ အတွက် ” ပဲငံပြာရည် ဆေးကြက်ဥအငန် ပြုလုပ်နည်း…” – Na Pann San
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ။
ကြက်ဥ ကို ရိုးရိုးပြုတ်စားရတာ ငြီးငွေ့နေသူများ အတွက် ပဲငံပြာရည်နဲ့ ရောပြုတ်ထားတဲ့ ဆေးကြက်ဥ အငန် ပြုလုပ်နည်း ကို ဝေမျှပေးချင် ပါတယ် ။ ပါဝင် ပစ္စည်း ကလည်း ကြက်ဥ နဲ့ ပဲငံပြာရည်ပဲ လိုအပ်တဲ့အပြင် ပြုလုပ်နည်း က အလွယ်လေးပဲ မို့ မိမိအိမ် မှာ အလွယ်တကူပြုတ်စားနိုင် ပါတယ် ။
ပဲငံပြာရည် ဆေးကြက်ဥအငန် ပြုလုပ်နည်း.
ကြက်ဥ ၄ လုံး၊ ပဲငံပြာရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ ဇွန်း။
၁။ ကြက်ဥ ၄ လုံး ကို အနှစ် မကျက်တကျက်လေး စားချင်ပါက ၅ မိနစ် ပြုတ်ပါ။ ကြက်ဥအနှစ် ကျက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၁၀ မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပေးလိုက်ပါ။ ထို့နောက် ကြက်ဥပြုတ်များ ကို ရေခဲရေထဲ ထည့်ကာ အအေးခံထား လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အခွံခွာလိုက်လို့ရပါပြီ ။ (ရေခဲရေထဲ ထည့်ထားပါက အခွံခွာရတာ ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ် ။)
၂။ အိုးအသေး တစ်လုံး ကို အပူပေးပြီး ပဲငံပြာရည်များ ဆူပွက်လာသည်အထိ တည်ထားလိုက်ပါ။ ပဲငံပြာရည် ဆူလာပါက မီးပိတ်ပြီးနောက် ကြက်ဥပြုတ်များထည့်ကာ ပဲငံပြာရည်များ နှံ့စပ်သွားအောင် လို့ ယောင်းမဖြင့် အသာအယာမွှေပေးလိုက်ပါ။ ဆား အရမ်းငန်တာမျိုး မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်မိနစ်၊ နှစ်မိနစ်ခန့်သာ မွှေပေးရပါမယ် ။ ဆား လေးလေးပင်ပင် စားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ၅ မိနစ်ခန့် မွှေပေးရပါမယ် ။
၃။ မွှေပြီးသွားရ င်တော့ ကြက်ဥရော ပဲငံပြာရည်တွေ ကိုပါ ခြောက်သွေ့တဲ့ ဖန်ပုလင်းထဲ ထည့်ကာ အဖုံးလုံအောင် ဖုံးထားပြီးနောက် ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းထားလိုက်ပါ။ အနည်းဆုံး ၆ နာရီခန့် စိမ်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ ဆေးကြက်ဥ အငန်လေး ရရှိသွားပါပြီ ။
Source: Thespruceeats. com
လက်သူကြွယ်လက်ချောင်းအောက် မှာ ဒေါင်လိုက်မျဉ်းတိုကလေး အဖြစ်တည်နေမယ်ဆိုရင်..